प्रोफाइल – Banking Khabar
बैंकिङ खबर । विश्व बैंककी नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक अंशुला कान्त अहिले भारतको सबैभन्दा ठूलो बैंक स्टेट बैंक अफ इण्डिया (एसबीआई)की प्रबन्ध निर्देशक एवम् चिफ फाइनान्सियल अफिसर छिन् । विश्व बैंकमा कान्त प्रबन्ध निर्देशकका रुपमा कान्तले विश्व बैंक समूहको वित्तीय र जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी जिम्मेवारी सम्हाल्नेछिन् । अरु सामान्य व्यवस्थापनका अलावा उनले फाइनान्सियल रिपोर्टिङ, जोखिम व्यवस्थापन लगायत
बैंकिङ खबर । महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सले औपचारीक कारोबार सुरु गरेकै दिन सञ्चालनमा आएको ५ महिनाको अवधिमा ५० करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गर्ने, २ वर्षको अवधिमा नयाँ खुलेको १० वटा बीमा कम्पनी मध्ये १ नम्बर बन्ने र ५ वर्षमा नेपालका बीमा कम्पनीहरु मध्ये उत्कृष्ट बीमा कम्पनी बन्ने उद्घोष गरेका भट्टराईको उमेर ६० वर्ष नाघिसकेको छ । प्रायः
बैंकिङ खबर । महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्सले औपचारीक कारोबार सुरु गरेकै दिन सञ्चालनमा आएको ५ महिनाको अवधिमा ५० करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गर्ने, २ वर्षको अवधिमा नयाँ खुलेको १० वटा बीमा कम्पनी मध्ये १ नम्बर बन्ने र ५ वर्षमा नेपालका बीमा कम्पनीहरु मध्ये उत्कृष्ट बीमा कम्पनी बन्ने उद्घोष गरेका भट्टराईको उमेर ६० वर्ष नाघिसकेको छ ।
बैंकिङ खबर । वि.सं.२०३० सालमा स्याङ्जा जिल्लाको फापरथुम गाविस ४ मा बस्ने एक मध्यम बर्गीय परिवारमा जन्मिएका भरतराज ढकालको बाल्यकाल सामान्य थियो । प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म नै सरकारी विद्यालय एवम् कलेजमार्फत अध्ययन गरेका उनी बाल्यकालदेखि नै सामाजिक कार्यमा अग्रसर थिए । स्याङ्जाको भगवति माविबाट प्राथमिक अध्ययन पूरा गरेका ढकालले स्कुलदेखि डिग्रीसम्मको शिक्षा स्याङजा, पोखरा र
बीमा क्षेत्र सुधारमा : चिरञ्जीवी चापागाईँका छ कदमहरु
बैंकिङ खबर । चिरञ्जीवी चापागाईँ बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समितिका अध्यक्ष हुन् । २०७३ साल पुष महिनामा उनी चार वर्षे कार्यकालका लागि बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । उनी समितिमा अध्यक्ष बनेर आएको डेढ वर्षभन्दा बढी भएको छ । यो समयमा उनले बीमा क्षेत्रका लागि थुप्रै परिवर्तन ल्याएका छन् । बीमा पहुँचमा वृद्धि
बैंकिङ खबर । भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाका गभर्नर उर्जित पटेल डा. पटेलका नामले चिनिन्छन् । अर्थविद् समेत रहेका पटेल एक कुल बैंकर एवम् आर्थिक सल्लाहकार समेत हुन् । सन् २०१३मा उनी चार वर्षका लागि गभर्नर बनेका थिए । त्यसअघि उनले पुनः आरबिआईकै डेपुटी गभर्नरको जिम्मेवारी पाए । डेपुटी गभर्नरमा दोस्रोपटक नियुक्त भएको
नेपालको बैंकिङ इतिहासमा पहिलो महिला सीईओ ‘अनुपमा खुँजेली’
बैंकिङ खबर । अनुपमा खुँजेली नेपालको बैंकिङ इतिहासमा पहिलो महिला प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बन्न सफल भएकी छिन् । उनी मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडको सीईओमा चार वर्षका लागि नियुक्त भएकी हुन् । बैंकको विहीबार गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा बसेको सञ्चालक समितिको वैठकले उनलाई सीईओको जिम्मेवारी सुम्पेको हो । दुई वर्षे कार्यकाल सकेर अनिल केशरी शाह अवकाश भएपछि
सुष्मा थापा/बैंकिङ खबर । ३१ डिसेम्बर २००५ देखि जेपी मोर्गन चेजका सीईओ रहेका जेमी डिमन संसारकै सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक लिने बैंकर हुन् । उनको तलब वार्षिक २९.५ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । ३१ डिसेम्बर २००६देखि जेपी मोर्गन चेजको संचालक समितिका अध्यक्ष समेत रहिआएका डिमन जेपी मोर्गन चेज र बैंक वन कर्पोरेसन एकआपसमा मर्जर हुँदादेखि
गोरखाको त्यो ठिटो, मेहनतले बन्यो यो ‘भवन भट्ट’ (जीवनीसहित)
रोयल आचार्य/बैंकिङ खबर- गैर आवसीय नेपालीहरुको छाता संगठन गैर आवसीय नेपाली संघको आठौँ विश्व सम्मेलनबाट अध्यक्ष पदमा विजयी भएका भवन भट्टको संघर्षको कथा निकै रोचक छ । गोरखा जिल्लाको एक दुर्गम गाउँमा सामान्य परिवारमा जन्मेका भट्ट अध्ययनको शिलशिलामा आजभन्दा २० बर्ष पहिले जापान पुगेका थिए । वि.सं. २०३३ सालमा जन्मिएका भट्ट पढाईमा सानै उमेरदेखि आफू अब्बल
स्वर्गीय डा. हरिहर देव पन्त नेपालमा लघुवित्तका पिता मानिन्छन् । मौद्रिक अर्थशास्त्री, निर्धन उत्थान बैंकका संस्थापक, कार्यकारी संचालक डा. पन्त नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर समेत थिए । ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न गरीब घरपरिवारहरुमा लघुवित्त कार्यक्रममार्फत आर्थिक, सामाजिक तथा मानसिक विकास गराउन तीन दशकभन्दा बढी समय उनले योगादान गरे । वित्तीय कार्यक्रम विस्तारमा भूमिका स्वर्गिय
२४ बर्षमै अर्बपति, सन्सार हल्लाउने को हुन् यी नारी ?
अहिले जताततै एक चिनियाँ युवतीको चर्चा छ । चीनकी २४ बर्षीया पेरेन्ना होई टिंग विश्वकै सबैभन्दा कम उमेर अर्वपति बनेर चर्चाको शिखरमा पुगेकी हुन् । सानो उमेरमा नै १.३ अर्ब डलर सम्पत्ति कमाएकी उनी अहिले युवाहरुको लागि प्रेरणाको स्रोत बनेकी छिन् । यसअघि, फेसबुकका सहसंस्थापक डस्टिन मोस्कोवित्ज संसारकै कम उमेरका अर्वपति थिए । पेरेन्ना विश्वका
अफ्रिकाका कान्छा अर्बपति जसले दिए एकलाखलाई रोजगारी
अफ्रिकाकै सबैभन्दा कान्छा अर्बपति हुन् मोहम्मद ‘मो’ देवजी। ४१ वर्षीय उनको सम्पत्तिको स्रोत विभिन्न व्यापार र व्यवसाय नै हो। फोब्र्स अखबारका अनुसार उनको कुल सम्पत्ति १।०९ अर्ब अमेरिकी डलर रियल टाइम १० जुन २०१६० रहेको छ। तान्जानियाका नागरिक उनी हाल डारे सलाममा बसोबास गर्छन्। ‘मो’ देवजी बुवाले १९७० को दशकमा तान्जानियामा खोलेको व्यापारिक समूह मोहम्मद
विश्वका आधा जनसंख्याको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति बराबर आठ व्यक्तिको सम्पत्ति भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । अक्सफामले गरेको अध्ययनका अनुसार, विश्वका सबैभन्दा गरिब ३.६ अर्ब जनताको बराबर सम्पत्ति अमेरिकामा छ । को हुन् त ती आठ धनाढ्य, जसको स्वामित्वमा छ, विश्वका आधा जनसंख्यासँग भए बराबरको सम्पत्ति ? १. बिल गेट्स माइक्रोसफ्टका फाउन्डर ६१ वर्षिय बिल
अजय पंगेनी- भारतका सबैभन्दा धनी मुकेश अम्बानीले पाँच महिनामा नै सात अर्ब कमाएका छन् । सन् २०१७ को सुरुवातदेखि अप्रिल महिनासम्म आइपुग्दा अम्बानीले सात अर्ब कमाएका हुन् । भारतका अर्बपतिको सूचिमा पहिलो नम्बरमा रहेका अम्बानीले अप्रत्यासित तरिकाले सात अर्ब कमाएका हुन् । अम्बानी भारतीय कम्पनी रिलायन्स इण्डस्ट्रिजका सबैभन्दा ठूला सेयरधनी तथा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक समेत
‘बैंकिङ क्षेत्रमा कायापलट आएको युग’
हाँस्य कलाकार शिवहरि पौडेल सबैका चिरपरिचित पात्र हुन् । २०२३ सालमा मकवानपुरमा जन्मिएका उनी हाल कलाकारितामा राम्रोसंग जमेका छन् । आम दर्शक र श्रोताहरुले असाध्यै रुचाएका शिवहरि कुनै समय बैंकका कर्मचारी थिए । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, शिवहरि नेपाल राष्ट्र बैंकका पुर्व कर्मचारी हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० बर्षको कार्यकाल बिताएर उनले अवकास प्राप्त
डेपुटी सीईओ नपाएपछि ओमका सीईओ एनएमबि बैंक नजाने
राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकको नाफा : कुनले कति कमायो ?
बाध्यात्मक मर्जर : नयाँ उपाय खोज्दै राष्ट्र बैंक
देवः विकास बैंकका शाखा प्रबन्धक पक्राउ : १८ करोड हिनामिना गरेको आरोप
डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम : कम्पनीको संख्या बढ्यो, कारोबार भने पुरानै शैलीमा